TUHUN CUSUB: Shiinaha oo jaamacadaha dalkiisa u diidey inay daraasadeeyaan halka uu ka yimid Covid-19 (Muxuu qarinayaa?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka TUHUN CUSUB: Shiinaha oo jaamacadaha dalkiisa u diidey inay daraasadeeyaan halka uu...
TUHUN CUSUB: Shiinaha oo jaamacadaha dalkiisa u diidey inay daraasadeeyaan halka uu ka yimid Covid-19 (Muxuu qarinayaa?)
(Beijing) 13 Abriil 2020 – Shiinaha ayaa xannibaad kusoo rogey in daraasaad madax bannaan lagu sameeyo isha uu ka yimid caabuq sidaha Covid-19, sida ku cad wareegto kasoo baxday nidaamka Beijing.
Warkan kasoo baxay Dowladda Dhexe ee Shiinaha ayaa waxaa sidoo kale qaab online ah loogu daabacay webabka laba jaamacadood, waloow markii dambe la tiray.
Hab-raacan cusub ee kasoo baxay Dowladda ayaa dhamaanba saaxadda aqooneed ee dalkaa fareeysa in cilmi baaris kasta oo ku saabsan Covid-19 lagu sameeyn doono faafreeb dowladeed kahor inta aan la fasixin in la daaboco.
Gaar ahaan, daraasaadka ku saabsan halka uu asal ahaan kasoo fufay fayruska geesoole ayay Dowladdu si gaar ah u tifaftiri doontaa, sida ku cad wareegtadan iminka la tiray.
Xeeldheere caafimaad oo ku sugan Hong Kong oo daraasad ku saabsan Covid-19 kala shaqeeyey jaamacadaha Shiinaha intiisa kale ayaa sheegay in aan faafreeb noocan ah lagu samayn shaqadooda bishii Febraayo.
Arrintan ayaa shaki hor leh abuuraysa, iyadoo la is waydiinayo waxa uu qarinayo Shiinaha oo uu cudurkani kasoo bilowday dhankiisa.
Previous articleWasiiradda Caafimaadka Somalia oo ka mid ah 13 wasiir oo Afrikaan ah oo la dagaallaya Covid-19 (Arag liiska)
Next articleSpain oo maanta shaqooyinkii lagu noqday xilli ay kiisaska cusubi yaraanayaan + Sawirro